तपाइको कुंडलीमा शुक्र कमजोर छ ! जिवनमा चाहेको भैइरहेको छैन! यसो गर्नुहोस -
२०७८, २४ बैशाख शुक्रबार ०८:३६ May 7, 2021 clickonLeaveaComment on तपाइको कुंडलीमा शुक्र कमजोर छ ! जिवनमा चाहेको भैइरहेको छैन! यसो गर्नुहोस
आज शुक्रबार हो। यस दिन देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। तर आज पनि ग्रह शुक्रमा समर्पित छ। जोसँग आफ्नो राशिफलमा एक मजबूत शुक्र स्थिति छ उनीहरुलाई सबै सुखहरु प्रदान गरिन्छ। ति मानिसहरु जसको कुंडलीमा शुक्र कमजोर छ, उनीहरुको जीवनमा सुविधाहरूको अभाव छ। तिनीहरू लागि आज भनिरहेका छौं कि कुन उपायहरू मार्फत तपाईंले शुक्रलाई प्रसन्न गर्न सक्नुहुन्छ ।
शुक्रदेवलाई प्रसन्न गर्न यसो गर्नुहोस
१ – यस दिन तपाईंले सेतो सामान दान गर्नु पर्छ। सेतो रंग शुक्रसँग सम्बन्धित छ। तपाईं ब्राम्हणलाई चाँदी, चामल, दूध, दही, सेतो चन्दन, सेतो लुगा दान गर्न सक्नुहुन्छ।
२- शुक्रको मनपर्ने रंग सेतो छ। आज तपाईले अधिक सेतो रंग प्रयोग गर्नु पर्छ। यस दिन सेतो वस्त्र लगाऊ।
३ – शुक्र प्रेमको प्रतीक हो। यो उपाए गरेमा तपाईको प्रनय समबन्ध पनि राम्रो हुनेछ।। पति र पत्नीबीचको सम्बन्ध बलियो हुनेछ ।
४ – शुक्रबार देवी लक्ष्मीको पूजा गर्दा कुंडलीको शुक्र दोष खत्म समाप्त हुन्छ, त्यसकारण यस दिन धन, धनाढ्य देवी, देवी लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्छ। शुक्रलाई खुशी पार्ने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको गाई, कुकुर वा कागलाई खाना खुवाउनु हो।
५ – घरको आँगनमा तुलसीको बोटको पूजा गर्नुहोस।
६ – पानीमा चन्दन मिलाएर नुहाउनुहोस। पूजाको समयमा निधारमा सेतो चन्दनको तिलक लगाऊ।
७ – सुगन्धित पदार्थ जस्तै इत्र, अत्तर, इत्यादि प्रयोग गर्नुहोस।
८ – शुक्रबार खीर बनाउनुहोस र गरीबमा वितरण गर्नुहोस।
आज सतबीज छरिँदै
२०७६, ९ मंसिर सोमबार ०७:४७ November 25, 2019 clickon
२०७८, १० जेष्ठ सोमबार ०९:५६ May 24, 2021 clickon
तपाईको (आईतबार जेष्ठ ३०) को राशीफल